Yusuf Garaad: Madaxweyne Farmaajo ayaa Codsi u jeediyay Shacabka
Madaxweyne Farmaajo ayaa Codsi u jeediyay Shacabka
Madaxweynaha dooran ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo xalay saq dhexe la hadlay dadweynaha ayaa uga mahadceliyey shacabka Soomaaliyeed daamaashaadka iyo isu soo baxa ay ku muujinayaan kalsoonida ay ku qabaan natiijada doorashada uu isagu ku guuleystay in uu noqdo Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynuhu wuxuu guushiisa ku tilmaamay mid u soo hoyatay oo ay iska leeyihiin shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu ballan qaaday in ay Dowladdiisu la dagaallami doonto musuqmaasuqa kuna shaqeyn doonto Dowlad wanaag,
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ay Dowladdiisu noqoneyso mid aammin ah oo ka shaqeysa caddaaladda.
Madaxweynaha la doortay, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuu shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in ay joojiyaan isu soo baxa iyo damaashaadka oo ay ku laabtaan howlahooda.
Tan iyo markii lagu dhawaaqay guusha Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay dadweynaha Soomaaliyeed muujiyeen damaashaad anigu mid la nooc ah oo la mid ah aanan hore u arag waayadaan. Waa bannaanbax ay dadku ku muujinayaan shucuurtooda iyo kalsoonida ay ku qabaan Madaxweynaha iyo waxa uu u taagan yahay oo ah isbeddel billow ah oo aad loogu hanweyn yahay in lagu diirsado.
Waa bannaanbaxyo aanay jirin Dowlad iyo hey’ad abaabushay toona.
Caasimadda Muqdisho, fagaaraha Dhamme Yaasiin ee Daljirka Dahsoon ayaa isu rogay meel ay dadku iskood isugu soo baxaan oo yeelatay muuqaal i soo xasuusiyay fagaaraha Taxriir ee magaalada Qaahira oo astaan u ahaa kacdoonka Carabta. Sidoo kale waxaa aad u cammirnaa waddooyinka magaalada oo ay dadweynuhu xeyn xeyn aan kala go' lahayn u mushaaxayeen iyaga oo ku dhaawaqaya erayo waddaniyad ah oo ay ka mid yihiin Ha noolaado Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Maanta oo Jimco ah dad badan ayaa isu diyaarinayay filyayna bannaanbixii ugu weynaa in ay isugu soo baxaan.
Waxaan rajeynayaa in dhammaan loo hoggaansanaado codsiga Madaxweynaha oo ku baaqaya in la joojiyo isu soo baxa dabbaaldegga iyo damaashaadka ah.
Madaxweyne Farmaajo qalabka warbaahinta ayuu farriintiisa u marsiiyay shacabka Soomaaliyeed.
Posted by Yusuf Garaad at 04:55:00